Idepho yasekhaya yangoLwesihlanu oMnyama kunye neCyber ​​​​ngoMvulo uThengiso ngo-2020: IiNtengiso esilindele ukuzibona-Kwaye xa sicinga ukuba ziyakuqala | WOWOW IiFaucets-WOWOW IiFaucets
Ikhaya / Blog / Ikhaya leDepho emnyama ngolwesiHlanu kunye nentengiso yangoMvulo we-cyber ngoMvulo 2020: izivumelwano esilindele ukuzibona-kwaye xa sicinga ukuba ziya kuqala
2020 / 09 / 14 uhleloBlog 6949 0
Ukuhlala eDepho eMnyama ngoLwesihlanu kunye ne-cyber ngoMvulo ukuthengisa i-2020: izithembiso esithembele kuzo ukuba sizibone- kwaye nje ukuba sicinga ukuba ziya kuqala
Intengiso ye-2020 yeNdawo yokuHlala eNtsundu ngolwesiHlanu iyaqhubeka nokuba ziinyanga ezimbalwa, nangona kunjalo ukuba ubuza ukuba yeyiphi eyona Dwelling Depot emnyama yangoLwesihlanu eqhele ukuba yiyo, okanye emva kokuba iqale ukuza-nokuba sele izakubakhona Ukuthengiswa kweDepho yokuthengisa nangayiphi na indlela le yr - ukwindawo efanelekileyo.
Kweli phepha lewebhu, uyakufumanisa yonke into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku malunga neNdawo yokuHlala emnyama eDepho kunye nokuthengisa ngoMvulo weCyber. Sikwongeze ezinye iingcebiso zobungcali ngokuthe ngqo xa kuthengwa ezona zibonelelo zangoLwesihlanu oMnyama, kunye neengcebiso ngeyona ndlela yokuqinisekisa ukuba ufumana ixabiso elisezantsi, kwaye kwenzeka ntoni xa ubona isivumelwano sokuHlala uhlala kuso inkangeleko yangoku.
Nokuba ufuna i-Dwelling Depot Black Friday inikezela ngezixhobo zasekhaya ezinokuthelekiswa nefriji, oomatshini bokuhlamba iimpahla, kunye nezitya zokuhlambela izitya, okanye izixhobo ezingasemva kwendlu, ukuncitshiswa kwe-DIY, okanye okongezelelekileyo, iDepping Depot inyanzelisiwe ukuba ibonelele ngentengiso entle ngoNovemba. Kwaye siya kukubeka.
Leyo yivenkile yakho yokumisa yonke imicimbi yokuHlala eDepho yangoLwesihlanu oMnyama kunye noMvulo weCyber, ke bhukhmaka eli phepha lewebhu kwaye uphonononge, ngenxa yeso sixa sonke kucetyiswa ukuba wazi kwangaphambi kukaNovemba ichanekile apha. Siza kuhlaziya eli phepha lewebhu ngalo lonke ulwazi lwamva nje kuba lubetha ulwazi, ke uya kuyilungiselela yonke into xa kubetha impelaveki enkulu.
Iza kuhlala nini indawo yokuhlala eDepho eMnyama ngoLwesihlanu kunye neCyber ​​Monday?
U-yr wokugqibela siqaphele ukuba ukuthengisa okuhlala ngooLwesihlanu abaMnyama eDepho kuyaqala veki nganye ngaphambi kosuku olukhulu lwayo, ngombane ubonelela ngokuzisa eyona nto ibalulekileyo yokonga imali kwimpelaveki emnyama yangoLwesihlanu. NgoLwesihlanu omnyama uhleli ngolwesiHlanu ka-Novemba 27 kule yr, nangona kunjalo ngaphandle kwamathandabuzo siza kubona uhlengahlengiso kwimpelaveki emnyama yangoLwesihlanu ngeli xesha.
I-2020 sele izamile isigqibo sahluke ngokupheleleyo, kwaye ngeAmazon Prime Day enamahemuhemu okuba izokwazisa ngo-Okthobha, sinokubabona kakuhle abathengisi besungula umnikelo wabo wokungena emnyango ngoLwesihlanu omnyama nangaphambi kwalonyaka. Ukuba kunjalo, iya kuba licebiso elilungileyo ukulawula ukubonelelwa kweDepartment Depot's ukusukela phakathi ku-Okthobha ukuya phambili, kwaye kuyakufuneka uzilungiselele ukusuka ngoLwesihlanu we-20 kaNovemba.
Uyakwazi ukubala nge-cyber yokuhlala ngoMvulo wokuhlala eDepho ngokuhlala kwi-bang ngoMvulo ngo-Novemba 30, kwaye uhlala ugqibe iveki ezimbalwa.
NgoLwesihlanu oMnyama weDepho yokuHlala:
U-yr wokugqibela siqaphele indawo yokuhlala esebenza kwindawo echaziweyo ngeempelaveki ezimnyama ngolwesiHlanu, kunye nokunikezelwa kokumiliselwa kwi-intanethi ngo-6: 00 kusasa kusuku emva koMbulelo. Lixabiso lokujonga umthengisi wakho wemveli ngolwazi olutshanje, njengoko oku kungatshintsha ukusuka kurhulumente kuye kurhulumente kwimpelaveki ngokwayo-kwaye, ngapha koko, le yr kukho ubhubhane omele ucinge ngalo. Nangona kunjalo, unyaka wokugqibela siqaphele uninzi lweevenkile ezihlala eDepho ivuliwe ukusukela nge-6.00 kusasa. Siza kukugcina uhlaziywa ngeDwelling Depot's ngoLwesihlanu oMnyama kunye neCyber ​​ngoMvulo iiyure zokuvula kuba ulwazi luzisiwe.
Indawo yokuhlala efanelekileyo yoMdibaniso oMnyama ngoLwesihlanu sithembele ekuyiboneni
NgoLwesihlanu oMnyama ohlala eDepho unikezela ngeyr yokugqibela enikezela ukonga imali ngokuzukileyo kuyo yonke indawo ukusuka kwindawo yokuhlala ukuya kwi-DIY, umbane kwimpahla yasemva kwendlu. Nangona kunjalo, ezinye iiklasi bezinamandla kunezinye, kungoko ke ukuba ufuna ukuthatha isigqibo malunga neemfuno zokuhlala ezifanelekileyo kunye nezixhobo ezikhulu zasekhaya kwindawo efanelekileyo. Sijonge ukuba iDepho yokuhlala kwindawo yokuthumela ngasemva kunye ne-DIY ibonelela ngoLwesihlanu oMnyama, emva komtya wentengiso enqabileyo kulo nyaka ukuza kuthi ga ngoku.
Uyakwazi ukulindela ukufumana ingubo yokuthengisa ukufihla iiklasi ezigqityiweyo xa uLwesihlanu omnyama efika, njengemigangatho yokugqibela yr ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 zexabiso eliphantsi kuyo yonke ibhafu kunye nezinto zokulala, kwaye kangange-50% isaphulelo ngaphakathi kwimpahla. Kwimeko apho emva kwezixhobo zangoLwesihlanu oMnyama, nangona kunjalo, uya kube ubona ukonga okumangalisayo kwemali kwi-Samsung efrijini nakwizibonelelo ze-oveni ngokufanelekileyo.
Izibonelelo ezihambelanayo ziya kufikeleleka nangomvulo weCyber, nangona zihlala zibona ezona zinto zibonelela ngokufanelekileyo kwimpelaveki emnyama yoLwesihlanu.
Fumanisa ukuba ungazifumanisa njani ezona ndawo zintle zokuhlala eDepho eMnyama ngoLwesihlanu
Unikezelo olugqibeleleyo lwangoLwesihlanu oluMnyama oluHlalisiweyo alunakuba ngaphezulu kwempelaveki kaNovemba uqobo. Akuthandabuzeki ukuba uza kufumanisa okona kubalulekileyo kokonga imali kuzo zonke ezi ntengiso, kodwa ngokuqinisekileyo konke kuxhomekeke kwinto oyifunayo.
Izixhobo ezincinci kunye neendawo zokuhlala ezifanelekileyo ziya kuhlala zisungula kwakamsinya kunezona zinto ziphambili ziluhlaza njengeefriji kunye negrill, umzekelo. Kwaye kunye nexesha lokuthenga le-2020 eliqala kwangoko kunesiqhelo, uya kuthi ufumane ukuqaqamba kubonelela ngokukhawuleza ngo-Okthobha kwezinye iimeko. Xa izibonelelo zoLwesihlanu oMnyama wokuhlala eDepho zibonakala ngathi, nangona kunjalo, kukho iindlela ezithile zokudala ukuba ufumana eyona buck isebenzayo.
Okokuqala, kuya kufuneka uyazi ngokuchanekileyo ukuba ulandela ntoni. Nokuba uhlaziya ikhitshi okanye awuphuculi izixhobo zamandla, yenza uphando kwifashoni oyikhangelayo kunye nentengiso esele ikhutshiwe kule yr. Ukuba urhwebo sele lubonile ukuncitshiswa okukhulu ngo-2020, alithandabuzeki elokuba ezi ndleko zithengiswayo ziya kubuya phakathi kuka-Okthobha no-Novemba. Siza kwinto eyongezelelweyo kwezi ntengiso zininzi kwiklasi nganye engezantsi.
Ngokukhawuleza nje ukuba uqaphele into oyifunayo kunye nexabiso layo eliqhelekileyo lokuthengisa, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ungaphoswa sisivumelwano nje ukuba sihlale. Yenza i-bookmark kweli phepha lewebhu, ngenxa yokuba sikulethela zonke ezona zixhobo ziNgcono zokuHlala eziMnyama ngoLwesihlanu ngokukhawuleza njengoko zivela.
Elona nyathelo lililo kukuqinisekisa ukuba ukhetha nje elona xabiso lisebenzayo. Sebenzisa isitsheki sexabiso ukuqinisekisa ukuba akukho ndleko ziphantsi ziyafikeleleka kwenye indawo, kwaye ukuba uyathanda, zuza kwiNdawo yokuhlala eDepho's ixabiso lomdlalo liqinisekisa ukunqanda ukuchitha imali yakho eninzi.
Kwimeko apho uthenga kumthengisi, inokukugcinela ixesha elibalulekileyo ngokusebenzisa iDepho's Depot's usetyenziso lwesixhobo sokufumana imveliso ke ngoku ungahamba kancinci kwiipaseji kwaye ufike kwiimveliso ozifuna phambili kwezihlwele.
Fumanisa ukuba ungazigcina njani ezona ndawo zintle zokuHlala eziMnyama ngoLwesihlanu
Sikubonisa ngokuchanekileyo into onokuyilindela kwi-Dwelling Depot ye-Black Friday ezayo efanelekileyo apha. Ukusuka kwizixhobo ezibonelelwa ngokulondolozwa kwemali kwi-elektroniki, izixhobo, kunye nakumabonakude, uya kufumanisa lonke ulwazi lwamva nje kunciphiso lwangaphambili kunye neentlobo ezibandakanyiweyo ukongeza kunikezelo olufikelelekayo ngoku. Ukunikezela ngoku kunika ukhetho olumangalisayo lokumisela ukunciphisa kwakho okulindelweyo kwimpelaveki yokuthenga, nangona kunjalo xa ubona ixabiso olifunayo akukho siqinisekiso sokuba kufuneka ibuye ngo-Novemba kwaye kungabikho sizathu sincinci sokuzimasa.
Indawo yokuhlala eDepho emnyama yangoLwesihlanu
Unikezelo lwezixhobo sisonka kunye nebhotolo yeNtengiso eNkulu yokuHlala eDepho yokuHlala. Ukugqibela konyaka siqaphele ukonga imali engaphezulu kwe- $ 1,000 kubavelisi abaphambili abanjengoSamsung kunye ne-LG, kwaye uya kuqikelela ukuba ukuthelekiswa okubonisiweyo kusendleleni yabo ngoNovemba. Ukuza kuthi ga ngoku kwi-2020 sikubonile ukuncitshiswa kwefriji, indawo yokuhlamba izitya, kunye noomatshini bokuhlamba, nge-40% isuswe ekusasazeni iifashoni kunye neentlobo. Ngapha koko, ukuba ufuna ukuphucula ikhitshi elipheleleyo, siyibonile indawo yokuhlala eDepho ibonelela ngesixa esongezelelweyo kule yr, ke inokukugcina ngakumbi ngokukhetha isuti epheleleyo.
Izixhobo zasekhaya zasekhitshini ezincinci
Izixhobo zasekhaya zasekhitshini ezincinci zibe linani leyona ndawo ishushu eDwelling Depot emnyama ngolwesihlanu. Kuthetha ukuba silindele imiba emikhulu evela kubavelisi abaphambili abanjengoNinja, iCuisineAid, kunye neMicrosoft Chef. Ulwabiwo olumnyama olumnyama lwe-KitchenAid lubonakala ngokuqinisekileyo ukuba le yr, uninzi lubonelela ngokuvela kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, nangona kunjalo oomatshini be-espresso kunye neefreyimu zomoya zenza kakuhle ngeli xesha lokuthenga ngokufanelekileyo. Kwaye, ukuba i-yr yokugqibela i-50% isaphulelo kwintengiso ye-cookware yinto emele ukwenziwa, sikulungele ukunciphisa ngo-2020.
Ngaphambili :: Ulwakhiwo lweSilumkiso seHlabathi seBhasikethi ye-2020 next: Ukunyuka kweMfuno yeeNdawo eziLungekileyo ezingashukumiyo yokuNika abaThwali beMveli Ithemba leentsuku eziPhezulu eziPhambili
2022 / 01 / 27 518
2022 / 01 / 25 991
2022 / 01 / 23 1226
2022 / 01 / 23 1311
2022 / 01 / 23 1173